सलाम डा. गोविन्द के.सी - Blogs of Sagar Prasai
सलाम डा. गोविन्द के.सी
With Dr. Govinda KC in Teaching Hospital
आज दिउँसो डा. गोविन्द के.सीलाई भेट्न म टिचिङ्ग अस्पताल पुगेँ। म पुग्दा त्यहाँ मान्छेहरूको भिड थियो। नेपाली झन्डा फरफराइरहेका थिए। डा. के.सीलाई बचाउ भनेर लेखिएका प्लेकार्ड जताततै थिए। सेतो कोट लाएका डाक्टरहरूको समूहले आफ्नो गालामा नै के.सीको समर्थनमा नारा लेखेका थिए। नेपाली जनताहरू कुनै दलको प्रयोजन बिना स्वतः स्फुर्त रूपमा सत्यको पक्षमा उभिन त्यहाँ आएका थिए भन्ने बुझ्न मलाई समय लागेन। किनभने म आफै पनि त्यसरी नै गएको थिएँ।
मैले त्यहीँका एकजना मान्छेलाई सोधेर डा. के.सी अनशन बस्नुभएको ठाउँ थाहा पाए। वहाँ बस्नुभएको कोठा बाहिर नै वर सम्मै मानिसहरूको लाम थियो। सायद मलाई व्हिलचियरमा देखेर होला एक जनाले-"ल वहाँलाई अगाडी जान दिउँ" भने। अनि सबैले मेरो लागी बाटो खाली गरि दिए। डा. के.सी बस्नुभएको कोठा बाहिर एकजना प्रहरी उभिएका थिए। उनले मलाई भित्र जानको लागी ढोका खोली दिए।
त्यो कोठा भित्र पनि मान्छेहरूको भिड थियो। एकजना सेतो कोट लगाएका युवा मान्छेले मलाई यता भनेर देखाए अनि म त्यता गएँ। कोठाको एउटा कुनामा पर्दाले बारेर छुट्टाइएको सानो भागमा बेडमा सुत्नुभएको रहेछ डा. गोबिन्द के.सी। मास्क लाउनुभएको थियो- त्यस कारण पुरा अनुहार देखिन। म वहाँ भन्दा अलि वर नै बसे र नमस्कार गरेँ, वहाँले टाउको हल्लाएर नमस्कार फर्काउनुभयो।
मलाई के भन्नु भन्नु भयो र भने- सर हामी पनि साथै छौं भन्न आएको।
वहाँले धन्यवाद भन्नुभयो।
अनि मैले नै भने- राम्रो कुराको लागी यति दुख गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मार्छन् होला सर यिनीहरुले।
यति भनि नसक्दा मेरा आँखाबाट बरर आँसु आए। मेरो अवस्था देखेर म आफै नै छक्क परेँ। अघि सम्म म त्यस्तो भावुक थिइन। तर वहाँलाई एक्कासि देख्दा मेरो मन थामिएन।
वहाँले हाँस्दै भन्नुभयो- गार्है पर्छ होला मलाई मार्न।
वरिपरिका सबै हाँसे।
मैले चस्मा खोलेँ- हातले मेरो आँखाका आशु पुछे र भने- तपाईलाई धन्यवाद छ सर। म नि तपाईको साथै छु।
वहाँले पनि धन्यवाद भन्नुभयो।
बाहिर मान्छेहरूको लाम सम्झे। म जस्तै अरू धेरै मान्छे वहाँसँग भेट्न पर्खिरहेका थिए। त्यस कारण अरू समय नलिई म वहाँसँग बिदा मागेर बाहिर निस्केँ।
बाहिर मानिसहरूको उस्तै उत्साह थियो। कोहि कागजमा केही लेखेर यो आन्दोलनको नया स्ट्राटिजी बनाउँदै थिए- कोहि यो अभियानमा समर्थनका लागी साँझ बाल्ने मैनबत्ती किन्न पैसा जुटाउँदै थिए। उनीहरूको लगाव र सत्य प्रतिको विश्वास देखेर मलाई एकदमै खुशी लाग्यो।
म टिचिङ्ग हस्पिटलबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले- "गोविन्द के.सी मरे मर्छन्, म के गरूँ त!" भनेर दिएको टिप्पणी सम्झे। अनि एक्कासि मेरो मनमा डा. गोविन्द के.सी प्रतिको सम्मान चार गुना बढ्यो। यो देशको सरकार उनलाई मार्न तयार छ; तर उनी डराएका छैनन्- गलतलाई गलत भन्न। र लड्दै छन्- भ्रष्टाचारका बिरुद्ध।
मार्टिन लुथर किङ्ग जुनियरले भनेका थिए- "हामी त्यो दिन देखी मर्छौं जुन दिन हामी हाम्रो अगाडी हुने गलत कुरामा पनि चुप बस्छौं।"
गोविन्द के.सी गलत कुराको अगाडी चुप बसेनन् र त उनी कहिले मर्दैनन्। सलाम् डा. केसी।